Posted by Gishe Abdi Wako on November 13, 2014
Hundasaa Waaqwayyaa:- Sadaasa Guyyaa 3, bara 1991, Guyyaa Seenaan Yaadatu
post by Gishe Abdi Wako!: Sadaasa/November 13, 2014 ·
Sadaasa guyyaa 3, bara 1991 guyyaa dhaabonni Oromoo (ABO, OPDO, IFLO fi ABUO) yeroo jalqabaa fi isa dhumaaf, galma tokko keessatti walgahuun, Qubeen har’a itti fayyadamnu afaan hojii Oromiyaa akka ta’u kan murteessan guyyaa Seenaa guddaa qabudha. Haa ta’u malee guyyaan kun akka qoosaatti dagatame. Torban darbe garuu marsaaleen Gadaa.com fi Ayyaantuu.com waan nu yaadachiisaniif galata guddaa qaban. Seenaa kana mee xiqqoo duubatti deebinee yaadachuun haala har’a keessa jirru haa xiinxallu.
Bara 1991 yeroo ABOn handhuura Oromiyaa, Finfinnee seene irraa kaasee Qubee Afaan Oromoo barachuu fi barsiisuun duula guddaatu godhamee ture. Qubee laatiniin hojjechuuf dhaaboliin Oromoo yeroo sana mootummaa cehumsaa keessa turan akka fudhataniif Sadaasa guyyaa 3, bara 1991 walgahii guddaa tokko qopheessuun, Qubeen kun afaan keenya ittiin barreessuuf fidala Gi’iizii fi kan Arabaa caala filatamaa ta’uu hayyoonni afaanii amansiisuun dhaaboliin Oromoo hundi sagalee tokkoon fudhachuu murteessan. Kun seenaa yeroo kamuu dagatamuu hin qabnee fi bara baraan kan yaadatamuu fi kabajamuu qabu dha.
Yeroo sana irraa eegalee, Afaan Oromoo barachuuf Oromoo qofa osoo hin taane warri Afaan Oromoo hin beeknellee qooda guddaa fudhatan. Erga ABOn Chaartera keessaa bahee boodallee manneetii barumsa magaalaa Finfinnee keessatti argaman hedduu keessatti dhuunfaan galgala barsiifamaa ture. Fedhii fi hirmaannaan yeroo sana namooti baruu fi barsiisuuf duula godhan hedduu guddaa ture. Kitaabonni barumsaa kuma hedduun maxxanfamee manneetii barumsaa Oromiyaa keessa jiraniif raabsaman. Barruulee fi gaaxexoonni danuun bahuu jalqaban. Barruulee yeroo sana dhalatanii fi maxxanfamuun ummata bira gahaa turan keessaa hanga tokko yaadachuuf Qabee, Innikka, Madda Walaabuu, Gadaa, Ichima fi Biiftuun kan yaadataman yoo ta’u, gaazexoota yeroo sana turan keessaa ammoo kan akka Bakkalcha Oromiyaa, Madda Walaabuu, Urjii,Coqorsa, Seyfe nebelbaal, Risaa fi Irreecha kan jedhaman ni yaadatamu.
Rakkoon kun akkasiin itti fufee afaan keenya Ogbarruu fi Aartiin du’a, moo furmaata barbaaduu qabna? Gaaffii kana Oromoon hundi kan walgaafachuu qabuu fi afaan keenya guddisuuf ani maalan gumaacha jennee ofi gaafachuu qabna.
Duula kana qindeessuu fi bobbaasuuf adda durummaan kan irraa eegamu midiyaalee Oromoo kanneen akka TV, Radio fi Marsaalee (website) ti. Isaan maxxansaalee bahan kana duukaa bu’anii yoo beeksisan, abbootii maxxansan yoo dubbisan, hayyoota oguma kana qaban yoo mariisisan hawaasni hubannoo irraa argata. Yoo hubate ammoo duula kana keessatti fedhiin hirmaata. Rakkoon Ogbarruu fi Aartii keenya mudate haala kanaan furmaata argatee guddata jedheen yaada. Dhamma kanaaf deebiin keessan murteessaadha.
Na hoofkalchaa! wallaalle fitaata!